Vanamwari veOlympian maTatoo: Zeus, Poseidon naMedusa | Kunyora
Olimpiki vanamwari maTatoo: Zeus, Poseidon naMedusa
ari nyora vamwari (uye zvimwe zvisikwa) zvechinyakare Girisi neRomaKunze kwekutonhorera kwazvo, vanobvuma mikana yakawanda.
Nhasi tichataura nezvazvo peya ye vamwari, Zeus naNeptune, uye yeimwe yeanonyanya kufungidzira mamaki eiyi tsika, Medusa.
1 Zeus, mwari mukurusa
2 Poseidon, ishe wemakungwa
3 Medusa, uyo ane vhudzi rinoridzirwa
Zeus, mwari mukurusa
Chinhu chimwe chinotonhorera pamusoro pevamwari vekare ndechekuti, kunyangwe vakaita sei ivo vamwari, vaive vachiri nehunhu hwevanhu. Nekudaro, Zeus aive mwari akakoshesa weOlympus, sezvo akadenha baba vake kuti vatore nzvimbo yake, uye aive nesimba pamusoro pemadutu nemheni, asi aive zvakare mukadzi (uye muchidyiro, sezvo akarara nevamwe varume) , izvo zvakaita kuti ave nevanoda uye matambudziko kwese kwese.
Mune tattoo, unogona kuzvifananidza sezvazvinoratidzwa mumabasa eumhizha: ne mheni muruoko uye ugere nehukuru hwekumira.
Poseidon, ishe wemakungwa
Poseidon anotasva masaisai nemabhiza ake machena (kana zvisikwa zvakashata zvine muswe wenyoka, zvinoenderana neshanduro) uye ane gungwa rese munyasha dzake. Iye ndiye hama yaZeus asi, kusiyana naye, iye akadzikama uye ane hunyanzvi mwari, kunyangwe paakatsamwa aigona kukonzera madutu anotyisa nekutyaira trident yake mugungwa regungwa. Izvo zvaifungidzirwawo kunge zvaive zviratidzo zveAtlantis, inonakidza uye yakanyudzwa kondinendi.
Mune tattoo unogona kuratidza poseidon mugungwa ne trident yake, iyo chinhu iyo inoshandiswa nayo kuizivisa mumabasa ekare.
Medusa, uyo ane vhudzi rinoridzirwa
Iyo nyaya yaMedusa, uyo ari pachokwadi asiri mwarikadzi, asi chikara, inosuwa kwazvo (uye, senguva dzose, ine shanduro zhinji, kunyange hazvo pasina anofara kutaura). Nhoroondo yacho ndeyekuti aive munhu Poseidon akabata chibharo mutemberi yaAthena. Athena akatsamwa uye pachinzvimbo chekuranga Poseidon, akatuka Medusa kuti atetese vanhu vakamutarisa mumaziso uye akashandura manea ake akanaka kuita nyoka.
Mumatato evamwari, Medusa anoshandiswa kuenzanisira chaizvo nebvudzi rake renyoka.
Wanga uchiziva here nyaya dzamwari aya nyora? Regai tizive mune zvakataurwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Kufungidzira Tattoos » Olimpiki vanamwari maTatoo: Zeus, Poseidon naMedusa
Maitiro ekusiyanisa matatoo ekare kuti utorezve
Hectographic bepa, chimwe chezvishandiso zvakakosha zveatateki maartist